သိုင်းစာအုပ်များ အလွယ်တကူ ဝယ်နိုင်ပြီ… - Thaing Wizard
သိုင်းစာအုပ်များ အလွယ်တကူ ဝယ်နိုင်ပြီ…
Posted on November 18, 2013 by athtet
သိုင်းပညာရပ်ကို ဝါသနာပါသူ မိတ်ဆွေများအတွက် အထူးစပါယ်ရှယ်သတင်း ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ… မကြာသေးခင်က အသစ်ထွက်ထားတဲ့ ပွဲကျောင်းဆရာကြီးဦးစိုးမြင့်ရဲ့ ပွဲကျောင်းစာအုပ်နဲ့ ဆရာကြီးကွန်ဖူးစိုးမြင့်ရဲ့ ၁၉၉၀ နှစ်များဆီက ထွက်ထားခဲ့တဲ့ သိုင်းစာအုပ်များကို ဝယ်ယူလို့ရနိုင်ကြောင်းပါ…
မြန်မာနိုင်ငံသိုင်းအဖွဲ့ချုပ် မြန်မာ့သိုင်းပင်မဦးစီးဆရာကြီး တိုက်တိုင်းအောင် ပွဲကျောင်းဆရာကြီး ဦးစိုးမြင့် ရေးသားပြုစုသော…
မူလဂါမဝါသီပုပ္ပား ပွဲကျောင်း မြန်မာ့သိုင်းလက်ဝှေ့လေ့ကျင့်ကစားနည်း၊ တန်ပြန်ခုခံကာကွယ် တိုက်ခိုက်နည်း စာအုပ်ကို အမြို့မြို့ အနယ်နယ်ရှိ စာအုပ်ဆိုင်တိုင်းတွင် ရနိုင်ပြီ။
မူလဂါမဝါသီပုပ္ပား ပွဲကျောင်း မြန်မာ့သိုင်းလက်ဝှေ့လေ့ကျင့်ကစားနည်း၊ တန်ပြန်ခုခံကာကွယ်တိုက်ခိုက်နည်း
အကြိမ် – ပထမအကြိမ်
ထုတ်ဝေချိန် -၂၀၁၃ မတ်လ
တန်ဖိုး – ၁၈၀၀ ကျပ်
နယ်မှ ဝယ်ရခက်နေသူများဖြစ်ပါက http://www.myanmaronlinesales.com/MyanmarBooks/BookDetails/29492/ တွင် မှာပါ။ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်နေသူများ www.myanmarbookshop.com/ တွင်မှာပါ။
ဖော်ပြပါစာအုပ်ကို ကနဦးက ebook ပြန်လုပ်ရန် စဉ်းစားခဲ့ဖူးသော်လည်း ဈေးကွက်တွင် အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်သည်ဖြစ်သောကြောင့် ebook မလုပ်ဖြစ်တော့ပါ။ လုပ်ဖြစ်ပါကလည်း တစ်ချို့စာမျက်နှာများကိုသာ လုပ်ဖြစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုကာလသည် သိုင်းစာအုပ်ဈေးကွက် မရှိသော ကာလဖြစ်သဖြင့် ebook ပြုလုပ်ခဲ့ပါက ဈေးကွက်ပျက်သွားကာ နောင်အသစ်ထွက်ပေါ် လာလတ္တံ့သော စာအုပ်များတွင်လည်း မည်သူမျှ အရှုံးခံထုတ်ဝေဝံံ့တော့မည်မဟုတ်တော့ပါ။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးကြစေလိုပါသည်။
ဆရာကြီး ကွန်ဖူးစိုးမြင့် ဘာသာပြန်သော လူတိုင်းအတွက် လျှပ်တစ်ပြက် ကိုယ်ခံပညာ၊ Self Defence In Every Emergency စာအုပ် ဝယ်ယူနိုင်ပြီ…
လူတိုင်းအတွက် လျှပ်တစ်ပြက် ကိုယ်ခံပညာ၊ Self Defence In Every Emergency (မြန်မာပြန်)
အကြိမ် – ဒုတိယအကြိမ်
ထုတ်ဝေချိန် – ၁၉၉၀ နိုဝင်ဘာလ
ရန်ကုန်မှ ဝယ်ယူလိုသူများ၊ နယ်မှ ဝယ်ယူလိုသူများ http://www.myanmaronlinesales.com/MyanmarBooks/BookDetails/18354/ တွင် မှာပါ။ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်နေသူများ www.myanmarbookshop.com/ တွင်မှာပါ။
အဆိုပါစာအုပ်ကို download ရယူလိုပါက https://thaingwizard.com/2013/02/27/self-defence-in-every-emergency-book/ မှာ download ရယူပါ။
ဆရာကြီး ကွန်ဖူးစိုးမြင့် ဘာသာပြန်ခဲ့သော ထိုင်း လက်ဝှေ့၊ Thai Boxing စာအုပ် ဝယ်ယူနိုင်ပြီ…
ထိုင်း လက်ဝှေ့၊ Thai Boxing (မြန်မာပြန်)
အကြိမ် – တတိယအကြိမ်
ထုတ်ဝေချိန် – ၁၉၉၅ မေလ
တန်ဖိုး – ၁၂၀၀ ကျပ်
အဆိုပါစာအုပ်ကို download ရယူလိုပါက https://thaingwizard.com/2013/02/21/thai-boxing-book/ မှာ download ရယူပါ။
အဆိုပါ website တွင် အခြားသော ဆရာကြီး ကွန်ဖူးစိုးမြင့်၏ စာအုပ်များ ကြော်ငြာထားသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသော်လည်း ဆက်သွယ်ကြည့်သောအခါတွင် ယခုဖော်ပြပါ စာအုပ်များသာ ရနိုင်တော့သည်ဟု သိရပါကြောင်း…
အော်… မေ့လို့ ဆရာကြီးကွန်ဖူးစိုးမြင့်ရဲ့ ဂျီကွန်ဒို စာအုပ်လည်း ရသေးတယ်ဗျ။ ဈေးနှုန်းကတော့ ၁၀၀၀-ကျပ် ပါ။
တန်ဖိုး – ၁၀၀၀ ကျပ်
ရန်ကုန်မှ ဝယ်ယူလိုသူများ၊ နယ်မှ ဝယ်ယူလိုသူများ http://www.myanmaronlinesales.com/MyanmarBooks/BookDetails/6384/ တွင် မှာပါ။ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်နေသူများ www.myanmarbookshop.com/ တွင်မှာပါ။
အဆိုပါ ဂျီကွန်ဒို ebook ကို download ယူမယ်ဆိုရင် https://thaingwizard.com/2013/02/28/jeet-kune-do-book/ ဒီမှာပါဗျာ…
This entry was posted in Martial Arts Book, News, Pwe Kyaung and tagged ကွန်ဖူးစိုးမြင့်, စာအုပ်, ပွဲကျောင်း, ပွဲကျောင်းဦးစိုးမြင့်, သတင်း by athtet. Bookmark the permalink.
9 thoughts on “သိုင်းစာအုပ်များ အလွယ်တကူ ဝယ်နိုင်ပြီ…”
ေတာသားေလး ေမာင္ၿငိမ္း on January 4, 2014 at 3:41 pm said:
kyaw min tun on June 18, 2014 at 5:22 pm said:
Aung Thu Htet on June 18, 2014 at 10:21 pm said:
ပြဲေက်ာင္းစာအုပ္ကေတာ့ ၂၀၁၃ မွ ထုတ္တာဆိုေတာ့ စာအုပ္ဆိုင္ႀကီးေတြမွာ ရပါတယ္။ က်န္တဲ့ စာအုပ္ေတြကေတာ့ ပါရမီစာေပမွာ သြား၀ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ လိပ္စာက အမွတ္ (၂၃၀)၊ ၂၉ လမ္း (အထက္)၊ ပန္းဘဲတန္းၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
ဦး​ေကာင္​း on August 6, 2014 at 3:41 pm said:
sai on November 30, 2014 at 1:51 pm said:
ဒီထဲက စာအုပ္တစ္အုပ္ကို လိုခ်င္ေနမိပါတယ္။ အြန္လိုင္းက ဝယ္ဖို႔ကလည္း အဆင္မေျပဘူး။ ၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းကဝယ္ၿပီးပို႔ေပးဖို႔ကလည္း ခက္ေနေတာ့ စကင္ဖတ္ၿပီး ပို႔ေပးနဳိင္တဲ့သူမ်ားရွိပါက ဆက္သြယ္ပါဗ်ာ။ က်သင့္ေငြကို ေပးေခ်ပါ့မယ္။ ကူညီၾကပါ စာအုပ္လက္ဝယ္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္က ညီအကိုမ်ားခင္ဗ်ာ…။ အီးေမးကေတာ့ saitayzar007@gmail.com ပါေနာ္။
Aung Thu Htet on December 1, 2014 at 9:34 am said:
ဘယ္စာအုပ္ကို ေျပာတာလဲဗ် ???
Barmathi Soezaw on October 5, 2015 at 4:53 pm said:
khantkyi on January 29, 2015 at 4:40 am said:
Barmathi Soezaw on October 5, 2015 at 4:51 pm said:
ျမစ္​ႀကီးနား မွာ​ေရာသိုင္​စာအုပ္​​ေတြရႏိုင္​ပါသလား ဘယ္​လိုဆိုင္​မ်ားမွာရႏိုင္​ပါသလဲ​ေျပာျပ​ေပးပါ